Agaasimaha cusub ee sirdoonka Maraykanka oo Turkiga booqasho ku jooga - BBC Somali
Image caption Agaasimaha cusub ee CIA-da
Agaasimaha cusub ee CIA-da ee maamulka Donald Trump, Mike Pompeo, ayaa Turkiga ku tegay socdaalkiisii u horeeyey ee uu dibadda ugu baxo.
Wadahadallada uu la yeelanayo madaxda Turkiga ayaa la filayaa in ay xoogga saari doonaan istaraatijiyadda dagaalka lagula jiro kooxda la baxday Dowladda Islaamka.
Turkiga ayaa laga yaabaa in ay Maraykanka ku tirtirsiyaan in ay joojiyaan taageerada ay siiyaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee Daacish kula dagaalamaya woqooyiga Suuriya. Waxa sidoo kale la filayaa in ay ka wada hadlaan in rayidka Suuriyaaanka ah loo sameeyo marino nabadgelyo ah.
Turkiga ayaa sidoo kale la filayaa in ay weydiistaan Pompeo in uu fududeeyo in Turkiga loo soo dhiibo wadaadka Maraykanka deggan ee Fethullah Gulen, oo Turkigu ku eedaynayaan in uu maleegay af-gembigii dhicisoobay kal hore, eedayntaas oo uu wadaadkaasina beeniyo.